ခလုတ်များ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောကြက်ဥအခါတိုင်းချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ "ခလုတ်များ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောကြက်ဥအခါတိုင်းချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို - BGR
ကြက်ဥချက်ပြုတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ တကယ်တော့သူတို့မပါဘဲတစ်ပန်းကန်လုံးထဲသို့မျှသာလောင်းသီးနှံကနေ, မနက်စာပြင်ဆင်ထားရန်အမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးသောအရာတို့ကိုအကြားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ချက်ပြုတ်ကြက်ဥနှင့်ကြက်ဥအလျင်အကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိသေး၏။ ဤမျှလောက်များစွာသောလူအခစျြအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ Rapid Dash ဥ Cooker ။ ဤကွီးစှာသောအနည်းငယ်သာ gadget ကသင်တစ်ဦး button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောကြက်ဥအခါတိုင်းချက်ပြုတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ကြီးမြတ်ရဲ့နှင့်ယခုအမေဇုံအပေါ် $ 19 အောက်မှာများအတွက်ရောင်းချမှုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံ: အဆိုပါကြက်ဥ cooker Rapid Dash ကြက်ဥ cooker ORIGINAL (နှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော) ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အကြိုက်မှပြီးပြည့်စုံသောကြက်ဥအဘို့အစျေးကွက်ကျနော်တို့ကအာမခံအချိန်တိုင်း!
QUICK + လွယ်ကူ: သင်အလုံအလောက်အချိန်ရှိသည်မဟုတ်လော ရိုးရှင်းစွာအသင်အကြိုက်ဆုံးကြက်ဥကိုရှေးခယျြနှင့် timer နေရာမှာထားကြ၏။ အဆိုပါအလိုအလျှောက်ပိတ် function ကိုသင့်ရဲ့ကြက်ဥအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအခါသင် overcooking နှင့်ဦးချိုသတိပေးချက်ကာကွယ်ပေးသည်။ သူကတောင်သင်၏သားသမီးသုံးနိုငျနိုင်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့ပါပဲ။ Power: 360 Watts ။ ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်, သတ္တု
စွယ်စုံ: ဒီ device ကိုခက်သေးငယ်တဲ့စားသုံးသူ, ကြီးမားတဲ့မိသားစုများသို့မဟုတ်တစ်အလုပ်များအချိန်ဇယားရှိသည်သောသူတို့အဘို့စုံလင်သည်။ ရိုးရှင်းတဲ့ဘာမျှ: ပြုတ်ကြက်ဥပြုတ်ကြက်ဥ, poached ဥ, က start button ကိုအောက်ပါမိနစ်ဥ, omelets တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအလျင်အမြန်စေလွှတ်!
Compact + ပေါ့ပါး: 1 ပေါင်အလေးချိန် cooker အမြန်ကြက်ဥ Dash ကိုပထမဦးဆုံးတိုက်ခန်း, မီးဖိုချောင်, တစ်ကောလိပ်အိပ်ဆောင်တွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် camper / ယာဉ်တန်းအားဖြင့်ခရီးသွားလာအဘို့သင့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, ဖက်ရှင်မှဒီဇိုင်းနှင့်အရောင်ရွေးချယ်မှုများက၎င်း၏ကြော့တိုင်းမီးဖိုချောင်နေရာများ (အပြင်, အပေါငျးတို့သဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင် fit နှင့်နည်းအာကာသသိမ်းပိုက်) မြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ပြုတ်ကြက်ဥ 6,2နှစ်ဦးစလုံးအတွက်သီးခြားဗန်းနှင့်အတူကြက်ဥတက် tick သို့မဟုတ် omelette ဖွဲ့စည်းရန်သည်အထိ
ပါဝင်သည်: အဆိုပါကြက်ဥဘွိုင်လာ Rapid Dash တစ်နှစ်တစ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အာမခံရှိပြီးအခြေခံမှခွက်, စာရွက်စာအုပ်နှင့်လက်လှမ်းမီတိုင်းတာမယ့်မဲခိုးဗန်းတစ်ခု omelette ဒယ်အိုး,6ကိုင်ဆောင်သူကြက်ဥလုပ်လေ၏ပါဝင်သည် ဒေတာင်ငွေ (အားလုံးမဟုတ်သည့်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပန်းကန်ဆေးစက်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်)
လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals ဒေသတွင်း၌နောက်ဆုံးပေါ်အပေးအယူထွက်ရှာရန်။ Web ကို။ ပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးကူပွန်မည်သည့်အချိန်တွင်မကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ တချို့ကကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးဖောက်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
BGR - 8 သင်သည်အခမဲ့ 10 စက်တင်ဘာလဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ကြောင့် iPhone, applications များပေးဆောင်